Chọọchị nke Dbọchị Ikpeazụ-WRSP
Chọọchị nke Dude Ụbọchị Ikpeazụ
1968 (Jenụwarị 7): Oliver Benjamin mụrụ na Los Angeles, California.
1998: Comụnna Coen mepụtara ihe nkiri ihe nkiri na-atọ ọchị The Big Lebowski nke Jeff Bridges gosipụtara Jeffrey “The Dude” Lebowski dị ka onye bụ isi.
2005: N’otu obodo njem nlegharị anya nke Pai, nke dị nso na Chiang Mai, Thailand, Oliver Benjamin hụrụ ndị nkiri na ndị enyi ya na obere biya, wee hụ mkpughe na ihe nkiri ahụ bụ itinye ụkpụrụ Taoist zuru oke maka onye nke oge a. N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ghọrọ onye nkwusa ozioma maka ihe nkiri ahụ ma guzobe okpukpe ọhụrụ, Chọọchị nke ụbọchị ụka nke ụbọchị ikpeazụ, ma ọ bụ naanị Dudeism. E webatara weebụsaịtị ahụ, Dudeism.com na njedebe nke afọ.
2008: The Dudespaper, bụ akwụkwọ nke Dudeism, malitere. N'afọ ndị sochirinụ, ọ chịkọtara ọtụtụ narị isiokwu site na Benjamin na ndị ọzọ na-eme Dudeist n'akụkụ dị iche iche nke Dudeism.
2009: Dude De Ching, nsụgharị na ịrụgharị ọrụ nke Tao Te Ching site na iji ahịrị sitere na Big Lebowski ka edere.
2009: Oliver Benjamin ka a kpọrọ ka o wepụta mmeghe mmeghe na Los Angeles Lebowskifest, ụfọdụ ndị Fans 3,000 kwughachiri ya mgbe ọ gụchara ahịrị site na The Dude's Prayer. Nke a mere ka ọ bụrụ isiokwu nke mgbasa ozi mgbasa ozi Volkswagen nke malitere ịrịa.
2011: Edere Abide Guide, akwụkwọ enyemaka onwe onye Dudeist na-enye ndụmọdụ maka otu esi adịkwu "Dude-like" na ụwa ọgbaghara oge a.
2014: A họpụtara Big Lebowski maka nchekwa na Ndekọ Ihe Nkiri Mba, na-ewere ya dị ka ọdịbendị, akụkọ ihe mere eme, ma ọ bụ nke mara mma site na oflọ Akwụkwọ nke Congress.
2015: Tao nke Dude, akwụkwọ edemede na edemede na-enye "nghọta dị egwu banyere Dude miri emi site na Lao-Tzu ruo Lebowski," edere.
2016: Dude De Ching edegharịrị kpamkpam, ya na nsụgharị ọhụrụ nke ihe onye edemede ahụ gbakwunyere na edemede iri asatọ na otu nke kọwara amaokwu ọ bụla ma gosipụta otu Dudeism na Taoism si bụrụ ụmụ nwanne nne na nna.
2018: Abide University na Institute malitere. A na-eche ya dị ka ebe Dudeist "agụmakwụkwọ-ish" mmụta na obodo.
Otu ụbọchị na 2005, na Pai na-eme njem nleta na nso Chiang Mai, Thailand, Oliver Benjamin [Foto dị n'aka nri] drunkụbigara mmanya ọkụ na ụlọ oriri na ọéụéụ ma ọ bụrụ na n'ọnọdụ mgbanwe mgbanwe a ọ hụrụ The Big Lebowski, ihe nkiri ọ hụrụ otu mgbe gara aga mana enweghị ekele zuru oke. Dika okwu nke ya si kwuo, nke ahu bu oge epiphany ya, mgbe o ghotara ihe omuma ihe omuma banyere ihe nlere. Nke ahụ bụ otú Chọọchị nke ụbọchị Dude nke Ikpeazụ si malite, na otú o si ghọọ isi na-asọpụrụ, Dudely Lama.
Ndị Dudeist tụlere ihe nkiri ahụ Big Lebowski ka ọ bụrụ isi iyi nke mmụọ na mmụọ mmụọ mmụọ, n'agbanyeghị na ọ bụ ọrụ akụkọ ifo. Ndị Dudeist na-ele omume Jeff "The Dude" Lebowski dị ka ihe atụ nwere ozi zuru ụwa ọnụ na ihe atụ bara uru ịchọrọ.
N'okpuru mkparịta ụka nke mkparịta ụka dị egwu na nghọta nke ihe nkiri a, ịnụ ọkụ n'obi nke ndị na-ege ntị, na ndị ahịa Bekee dị ike ise, enwere m nkọwa dị egwu. Ọ dị ka nkwenkwe okpukpe miri emi, dịka otu onye ahụ Pọl Paul nwere n'okporo ụzọ Damaskọs ma ọ bụ nke Bob Dylan nwere mgbe ọ gbasịrị isi ya n'ihe mberede ọgba tum tum. Naanị, kama ịhụ Jizọs Kraịst, ahụrụ m Jeff Bridges n'ime uwe na-egbuke egbuke na-akpọ aghara aghara aghara "Dude." Dude, nke m chere, nwere ike bụrụ onye nzọpụta nke ihe nile a kpọrọ mmadụ, mmadụ. Ma ọ bụ ụfọdụ n'ime ya, na agbanyeghị " (Benjamin 2013).
Oge ihe atụ dị ịrịba ama mere na 2009, mgbe Oliver Benjamin nyefere ngọzi mmeghe na Lebowskifest na Los Angeles, ebe ọtụtụ puku ndị nkiri nke ihe nkiri ahụ (ọtụtụ n'ime ha abụghị ndị Dudeist) kwughachiri ya ka ọ na-agụghachi ahịrị site na Ekpere Dude, nke gbanwere mbipụta nke Ekpere Onyenwe Anyị nke ọdịnala Katọlik, bụ nke tinyere usoro sitere na fim ahụ. N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, ụlọ ọrụ mgbasa ozi jụrụ ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịse ya banyere mkparịta ụka Dudeism maka mkpọsa mgbasa ozi Volkswagen iji kwado cinemas ndị nweere onwe ha na UK Ọ ghọrọ ọrịa malitere ịrịa na You Tube ma nyere aka chebe azụmahịa akwụkwọ maka Nduzi Abide, nnyocha nchoputa banyere The Big Lebowski na ihe ihe nile putara ya na ndi Dude.
Dudeism anaghị ajụ nhazi dị ka otu okpukpe, na n'ezie mgbe ọ na-agbachitere onwe ya site na ebubo nke ịbụ egwuregwu, ma ọ bụ okpukpe ụgha. [Foto dị n'aka nri]
Dị ka onye guzobere ya si kwuo, ọ bụ ezie na Dudeism bụ nzukọ na-eto eto, nkà ihe ọmụma ya bụ nke ochie: "Ddị Dudeism mbụ bụ ụdị mbụ nke Taoism ndị China, tupu ya ejiri aghụghọ anwansi na mmiri ahụ wee dị ịtụnanya" ("Gịnị bụ Dudeism") 2019). Nkọwa nke Benjamin banyere Daoism mbụ bụ na ọ na-azọrọ na ọ bụghị iwu Chineke ma ọ bụ akụkụ dị ebube. Ọ na-akọwa Dudeism dị ka ụdị Taoism nke oge a, nke "sụgharịrị" ka ọ bụrụ okwu nwoke nke oge a nwere ike ịghọta na nke "emelitere" ya mere ọ nwere ike ịbịaru taa (Kosnáč 2017).
Isi echiche nke Dudeism bụ na:
Ndụ dị mkpụmkpụ ma sie ike ma ọ nweghị onye maara ihe ị ga-eme banyere ya. Ya mere emela ihe ọ bụla banyere ya. Naanị nwafọ, nwoke. Kwụsị ichegbu onwe gị nke ukwuu ma ị ga-abanye na njedebe. Soro ụfọdụ ndị enyi laghachi na ụfọdụ oat soda (yabụ biya) yana ma ị gbanwere iku ma ọ bụ gọta, mee ike gị niile ka ị bụrụ eziokwu nye onwe gị na ndị ọzọ - ya bụ, nọrọ. (“Gịnị bụ Dudeism?” 2019)
A na-ekwusi ike na a gaghị eji ndụ eme ihe iji gbalịa inweta ọkwá ma ọ bụ ihe onwunwe, ma a ga-enwe obi ụtọ maka onwe ya. Onye kwesiri izere nhụjuanya site na izere nchegbu na-enweghị isi na ịmalite inwe mmetụta dị jụụ banyere ndụ. Ihe ụtọ dị mfe bụ ndị kacha mma (Kosnac 2017).
Benjamin na-ekwu na Dude nwere ike ịdị ka ihe nlereanya na-enweghị atụ, mana:
n'oge a, ebe ihe kachasị echegbu anyị abụghị Armageddon ma ọ bụ ndụ mgbe a nwụsịrị, mana nchegbu zuru oke na mmekọrịta dị adị, Dude na-enyere anyị aka ịkọwapụta ndụ ka mma. Anyị achọghị ndị dimkpa ga-eduru anyị gaa n’ala e kwere na nkwa. Anyi choro ndi Dude ka ha nyere anyi aka iru ebe anyi no. Isi okwu nke Dudeism bụ ịdị ndụ mgbe ị dị ndụ, ebe a na ugbu a, dịrị ndụ dị ka o kwere mee (Falsani 2011).
Dude abụghị dike nye ndị Dude n'ihi na ọ dị umengwụ ma ọ bụ na ọ chọghị oke oke, mana n'ihi na ọ nọọrọ onwe ya. Ndabere nke nnwere onwe bụ udo nke uche. N'ịbụ onye na-enweghị nrụgide nke ndị ọgbọ na atụmanya mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nchegbu gbasara uru onwe onye na ọkwa.
O doro anya na okpukpe ụgha bụ akụkọ ọdịnala nke ọtụtụ aha na-agafe ma daa n'ọtụtụ ụzọ: N'akụkụ oge ahụ na Taoism Lao Tzu malitere na China, Gris oge ochie mere ka nkà mmụta ihe ọmụma nke Heraclitus ("Ups na downs, strikes and gutters" "), Epicurus (" Na-agbanye ya mfe, mmadụ "), na Stoics (" Enweghị ike ichegbu onwe gị banyere shit "). N'oge na-adịghị anya, na Levant, Jizọs Kraịst kwusara ozi ọma n'ụzọ dị egwu tupu Chọọchị ahụ wepụsịa ozi "lilies nke ubi" ya na ịkwado ndị dị umeala n'obi (Benjamin 2013).
Dudeism ama ụma ghara ịzụlite ihe ọ bụla esattological expectancy. Nke a dị n'ime mmụọ nke Epicureanism nke na-ekwu na anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị maka chi, ihe ọma na ihe ọjọọ ma ọ bụ ọnwụ, n'ihi na chi dị iche iche, ihe ọma na ihe ọjọọ na-arụ ụka na mgbe ọnwụ ga-abịa, anyị agaghị anọ ebe a ọzọ. (Kosnac 2017). Onye Dudeist na-eru nso na ọnwụ bụ na ọ bụ naanị ihe ihere na anyị ga-anwụ. Ọ bụ ya. Ihe kacha mma bụ ka Dude. Ihe odide Dudeist ndị ọzọ dị ka ihe atụ ndị kwesịrị ịgbaso bụ: Lao Tzu, Heraclitus, Epicurus, Snoopy Dog, Kurt Vonnegut, ọbụna Buddha ma ọ bụ onye ụkọchukwu Jizọs. ("Great Dudes of History" 2019)
Dudeism bụ syncretic site na imewe. A na-eme ka ya na okpukpe ọ bụla ọzọ, gụnyere Iso Ụzọ Kraịst, Islam ma ọ bụ okpukpe ndị Juu. Ọnọdụ ndị Dudeist bụ, na ọ bụrụ na Dudeism na-enyere ndị ọzọ aka ịgakwuru onwe ha banyere okpukpe nke aka ha mgbe ahụ, o mezuola nzube ya. N'otu aka ahụ, a na-ewere onye kwere ekwe okpukpe nke okpukpe ọ bụla dịka Dudeist (Kosnac 2017).
Otu n'ime ihe ndị dị mkpa, ọ bụ ezie na ọ bụ nke a na-amaghị nke ọma, enwere ike ịchọta usoro nke Dudeism na pragmatism ya na mgbochi-enweghị atụ. Dzọ Dudeist bụ ezi uche na nkwenye, nke na-ahụ ụdị atụmatụ ọ bụla dị ka enyo. Dị ka Benajmin si kwuo ya, "Dude anaghị atụkwasị obi na nnukwu echiche." (Ajụjụ Ọnụ nke onwe nke 2018) Ọ na-ekwusi ike na nchepụta nke ọma bụ ihe ebumpụta ụwa, ọ bụ ya mere o ji esi ike ịzụlite obi abụọ. Ọ na-atụ aro na iji gbasaa echiche dị otú ahụ, mmadụ kwesịrị iji akụkọ ọma dị ka ụgbọala; ma ọ bụghị ya, ọ bụrụ na mmadụ ejiri ozi na-emegide njegharị gazuo ụwa, mmadụ agaghị agaru oke. Ọ bụ ya mere ihe nkiri na omume Dude ji dị oke mkpa: Ha na-enye akụkọ ifo ndị nwere ike ịbịnye ụdị nke Daoism nke Dudeism na-anwa ịbụ. (Ajụjụ Ọnụ nke onwe nke 2018)
Ebumnuche nke Dudeism bụ ịchị ụwa echiche na ibi ndụ nke na-ajụ mmebi iwu kacha njọ. Dị ka Benjamin si kwuo ya, mmepeanya bụ ọnọdụ ebumpụta ụwa na-ekwekọghị n'okike nke ụmụ mmadụ. E chere na ụmụ mmadụ bu mkpụrụ ndụ ihe nketa iji “wepụta ya” ma “bulie mkpụrụ osisi na savannah Africa, anaghị ebi n'obodo ukwu na ịdọgbu onwe ha n'ọrụ na cubicles." (Benjamin 2013). Ndị na-eme ihe nkiri na-enwe ekele maka ọtụtụ uru dị ịtụnanya nke mmepeanya wetara, dị ka ibi ndụ dị elu ma ọ bụ ogologo ndụ. Ha achọghị ịlaghachi azụ n'oge dinta, ma kwenyeghị na ọ ga-ekwe omume. Agbanyeghị, n'agbanyeghị ọtụtụ onyinye, mmepeanya na-eme ka ndị mmadụ na-emegide onwe ha na ọdịdị ha, n'agbanyeghị na ndụ dị mfe na nke dị mfe dị mfe karịa ka ọdịbendị nke oge a na-atụ aro. Ọdịbendị na-ewetara ya ọnọdụ nchegbu na ịchọrọ na onye ọ bụla na-agbasi mbọ ike ma na-arụsi ọrụ ike dịka o kwere mee, ọ bụghị n'ihi na ha chọrọ ma ọ bụ nwee ọ enjoyụ na ya, ma ọ bụ ọbụlagodi na ọ dị mkpa ịlanarị. Ọdịbendị emeela ka mmadụ nwee ike itinye uche na nrụgide ndị ọgbọ iji mezuo ebumnuche ya. Dị ka ndị ọkà ihe ọmụma oge ochie si hụ (malite na Lao Tzu na Epicurus mgbe mmepeanya mbụ nke China na Greek malitere), mmadụ enweghị ọgaranya n'ihi ihe o nwere, mana ihe ọ na-achọghị. Ndị a na-akpọ ndị nwere ihe ịga nke ọma nwere ike ịba ọgaranya ma ọ bụ n'ọkwá, mana ndị a nwere ike ịbụ ndị na-enweghị mgbagha na ndị aka ike, ma n'otu oge ahụ ha dara ogbenye na ụkpụrụ na-adịghị agafe agafe dịka udo nke uche na njikwa onwe ha na ndụ ha. Akụ na ụba ma ọ bụ ọnọdụ na-eme ka agụụ na-agụkwu maka otu ihe ahụ, dịka ụjọ ịtụfu ya. Nke a na - ebute nrụgide oge niile, agụụ na - enweghị ike ịda mba na ezumike (Personal Interview 2018).
Omume di na nwunye abughi ihe di oke mkpa na Dudeism. Ka o sina dị, ụdị ụfọdụ amalitela oge, ma ọ bụ site na imewe. Dịka ọmụmaatụ, ndị Dudeist nwere akara njirimara, ma ọ bụ akara ngosi - yin / yang bowling ball [Image na nri].
Mgbe mmadu choro ibu onye Dudeist, o gha acho igbaso ihe nlere anya nke ndi Dude na Dudeist, mana na omume, dika enwere ike ịtụ anya, isonye di mfe, ya na ndi Dudeist kwere nkwa iweta Dudeness bu nani ihe achọrọ: “ M na-ekwe nkwa ịkwado ụkpụrụ nke Dudeism: Iji mee ka ọ dị mfe, ịbụ onye nzuzu (na-adị mfe) nye onye ọ bụla m zutere, na idobe uche m "(" Iwu Ordination "2019).
Akwukwo nke Dudeist bu nke di n'ime Nduzi Abide:
Dika onye Dudeist choro, M, aha, nkwa:
Iji mee ka ọ dị mfe, mmadụ, iji gbasaa okwu Dude mgbe ọ naghị agwụ ike.
Iji na - eme oge iji nwee ụfọdụ ndị na - agba chaa chaa, ụfọdụ ndị na - aṅụ,
iji nyochaa mgbe niile iji hụ ọnọdụ ọnọdụ m dị, [ED: ịkọ aka na ahụ ike]
ịghara ịgwọ ihe dịka ụmụ nwanyị, nwoke, tufuru echiche m ebe ahụ,
iji mee ka uche m ghara ịma jijiji,
iji nwee obi ụtọ ụlọ ọrụ na-ezighị ezi na-arụ ọrụ mgbe ha na-edozi eriri, [ED: na-ezo aka na mmekọahụ]
ka ị ghara ikwu ihe ọ bụla ọzọ n'ihi na akwụkwọ na-agwa m ka m mee ya,
na mgbe mgbe ụwa na-arahụ ịbanye, ya mere nye m Dude (Benjamin na Eutsy 2011).
Mgbe a na-enye ya ọzụzụ dịka onye ụkọchukwu Dudeist, otu onye na-enweta akwụkwọ ntanetị akwụkwọ ntanetị ma ọ bụ legitimation dị ka onye nchụàjà Dudeist. Enwere ike ịzụta akwụkwọ edemede na akwụkwọ ndị ọzọ, dị ka kaadị ID [Image na nri].
O doro anya na ndị Dudeist na-egwuri egwu na okpukperechi okpukpe. Ma ha anaghị eji ha eme ihe ọchị; nke ozo bu ezi okwu. Ha na-eme nke a n'ihi na ha nwere ike ịkwanyere ọtụtụ omume okpukpe ugwu (emume, oge ejiri n'obodo, ntụgharị uche, wdg), yana n'ihi na ha nwere onyinye bara uru na ndụ ndị mmadụ. Otu ihe atụ bụ ngalaba ekpere nke ibe Dudeist. Mmadu puru ileta ya kpee ekpere. Ndị na-eme ihe nkiri ekwenyeghi na onye ọ bụla na-ege ntị n'ekpere, mana site na mmetụta placebo na ọkwa ụfọdụ nke ntụgharị uche onwe onye chọrọ mmadụ nwere ike ịnata ụfọdụ mgbapụta. A na-ahụ nke ahụ dị ka uru bara uru na mmụọ. N'ụzọ dị otú a, ndị Dudeist na-anwa ị nweta uru ndụ n'ezie site na omume okpukpe, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha ekwenyeghị n'ozizi okpukpe ndị ejiri iwu mee ihe. Ha na-ahụ ihe na-arụ ọrụ, na-achịkwa ya nke ọma, nye ya aha zany ma kwalite ya na weebụsaịtị ma ọ bụ na mbipụta ha (Personal Interview 2018).
Ndị Dudeist na-eme ememme dị iche iche n'afọ niile, na-abụkarị ụdị Dudeist nke ezumike ndị a hụrụ na ọdịnala ndị ọzọ dịka Kerabotsmas, Day Indudependence ma ọ bụ Were ya Easyster. Ezumike kachasị mkpa bụ na March 6, Day of the Dude (Benjamin 2013). Nke a bụ ụbọchị nke akwụkwọ seminal nke Dudeism, The Big Lebowski a tọhapụrụ ya n'ihu ọha. Ọ ga-abụ ụbọchị efu nke ndị Dudeist niile kwesịrị ịsaa jụụ ọbụna karịa karịa (Kosnáč 2017).
A na-atụle ịgba chaa chaa dị ka otu n'ime ihe ntụrụndụ kachasị mma, na ịhazi nzukọ Dudeist dị iche iche na-agba ume maka uru ọgwụgwọ ya na nke obodo. Dị ka Oliver Benjamin na-ekwu, ọgbọ egwuregwu na-enwe ọdịmma nke mmekọrịta ọha na eze na nke uche dị ka ụka (ABC 2012).
Dudeism kwadoro ntụgharị uche na omume yoga nwere ụfọdụ njirimara. Ebum n’uche bụ ime ka mmadụ ghara iche echiche. Dị ka Benjamin si kwuo ya, ọ dị ka ịgbanye redio, mana kama ịnwa ịchọta ọwa, otu na-anwa ịchọta ọnọdụ ahụ (ABC 2012). Benjamin ugbu a na-emepe sọftụwia iji mepụta ụlọ ntụgharị uche n'ịntanetị. Onye ọrụ ahụ nwere ike ịhụ onye ọzọ nọ n'ụlọ nzukọ ahụ, ma a ga - enwe oge, egwu egwu na ndekọ nke usoro ntụgharị uche gara aga nke onye ọrụ. Ọ ga - abụ ngwa ọrụ iji nye echiche na mmadụ jikọrọ ya na ndị ọzọ yana otu esi echekwa usoro ntụgharị uche mmadụ. Benjamin kwenyere na nke a kwesịrị ịkpali ndị mmadụ ịgbalị ịme ntụgharị uche na omume oge niile ma nyekwa echiche nke obodo. Ihe na-adọrọ mmasị bụ na mgbe onye ọrụ metụrụ òké ya aka ma ọ bụ metụ ya aka, oge ahụ ịkwụsịtụ. The ọrụ ga-esi otú gbochie fiddling na ya na kọmputa; o kwesiri itughari uche, ka emechara (Personal Interview 2018).
A na-ahụta Yoga dị oke uru maka ahụike mmadụ, mana naanị ọnọdụ a na-ewere na ọ bụ Dudeist siri ike bụ ọnọdụ dị ala (dina n'ala). Ekwesiri ime ya dika izu ike dika o kwere omume (Kosnáč 2017). Echiche Dudeist na yoga bụ na ihe ọ bụla nwere ike ịbụ yoga ma ọ bụrụ na ewetara ya uche ziri ezi na otu dị jụụ dị ka o kwere mee mgbe ị na-eme ya. Nke a sitere na ụkpụrụ Taoist nke wu-wei, ma ọ bụ "omume na-enweghị isi" (Personal Interview 2018).
Dude-jitsu bụ Dudeist mara nka, ọ bụ ezie na ọ bụ nke ọgụgụ isi. Echiche bụ ịnye ngwaọrụ ọgụgụ isi na usoro nkwukọrịta nke ga-enyere ndị Dude aka ibi ndụ n'ụzọ na-enye ohere ka nsogbu na-agba ha gburugburu.
Na Jiu Jitsu, Ọ bụrụ na mmadụ abịakwute gị, onye ọ bụla maara na ị kwesịrị ịhapụ ụzọ. Ọ bụrụ na mmadụ pịa gị ụra, ekwekwala ka ha tie gị aka n'ihu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na mmadụ kparịa gị, anyị na-ahapụ ka ha kụọ gị (na ego). N'ihi gịnị? Maka na a zụghị gị ileghara ya anya. Havekwesịrị ịzụ onwe gị ka ịleghara mkparị anya ma ghara ịlụ ọgụ na mwakpo (Personal Interview 2018).
Mmadu kwesiri izere esemokwu, ma oburu na o kwere omume, ma obu choo uzo iji gbanwee ngwa agha nke onye na-eme ihe ike megide ya, ma oburu na o ruru eru ma nwee amamihe. Ikike iji "mee ka ọ dị nfe" n'otu ụzọ ahụ Dude mgbe a na-ebuso gị iwe bụ ihe mgbaru ọsọ nke Dude-jitsu (Personal Interview 2018).
Òtù ndị Dudeist yiri ndị netwọk na-arụ ọrụ nke ọma ndị nwere obi ebere, na onye ọ bụla nwere ike ichi echichi dị ka onye ụkọchukwu Dudeist. Enweghị ezigbo ndị isi ọchịchị ma ọ bụ ikike. Dudely Lama (Oliver Benjamin) na-ewere onwe ya "onye nchịkwa" ma ọ bụ "onye na-agụ akwụkwọ" n'echiche nke na ọ na-edebe weebụsaịtị. Ndi otu ndi nnọchite anya na-enyere aka ijikwa saịtị ahụ, ọgbakọ na ibe mgbasa ozi mmekọrịta dị iche iche nke ndị Dudeist na-emekọrịta. Ọtụtụ ndị ụkọchukwu na-ewere aha ndị na-enweghị isi ma ọ dịghị onye nwere ike ọ bụla. [Foto dị n'aka nri]
A na-enyefe akwụkwọ ndị yiri nke ahụ n'akwụkwọ ndị ebipụtara n'okpuru aha "Abide University Press." Ndi oru akuko a abughi ulo akwukwo, kama o bu akara nkwado nke akwukwo ndi ozo, ederede na ọdịnaya ndi ozo nke Oliver Benjamin na ndi ya na ha choro nwere mmuta Dudeist kwesiri ma gha enyere aka kwalite nkà ihe omuma nke Dudeism. Enwere ike iji ya tụnyere akara “Imprimatur” nke nnabata ụka Katọlik jiri.
E nwere ndị 500,000 bụ ndị Dudeist bụ ndị ụkọchukwu (Ndenye Interview 2018). Dị ka Oliver Benjamin, bụ onye na-ahụ maka ịhazi ọtụtụ ndị ụkọchukwu Dudeist, bụrụkwa onye na-elekọta ụlọ ọrụ Dudeist bụ onye ọrụ ọchịchị, ma eleghị anya, pasent iri asaa na ise nke ndị Dudeist bụ ndị ikom, nke ka ukwuu n'ime afọ iri atọ. Otú ọ dị, enwereghị ndekọ ọnụ ọgụgụ. Echiche Dudely Lama siri ike na nkesa Dudeists gburugburu ụwa bụ pasent 60 na US, pasent iri atọ na UK, Australia na mba ndị ọzọ na-asụ Bekee, na pasent iri n'ebe ọzọ (Kosnac 2017).
Otu Dudeism dị iche iche Facebook bụ nnukwu ogige nke ndụ Dudeist, yana mkparịta ụka doro anya na-eme kwa ụbọchị gbasara Dudeism na otu esi etinye ya na ndụ mmadụ. Ndị otu a na-arụsi ọrụ ike, na nkọwa na-aga otu narị otu narị ma na-abanye ọtụtụ puku na a ihe ole na ole. Na Jenụwarị 2019, nnukwu ìgwè nwere ihe dịka òtù 32,600. Ebe ọzọ ka ndị Dude na-ekwurịta okwu bụ akwụkwọ Dudeism Facebook, nke nwere ihe gbasara 800,000 ndị na-eso ụzọ (Dudeism Facebook Group 2019).
Ihe dika ndi United States nile choputara ikike nke Church of the Day Dude iji dozie ndi nchu aja, na-enye ha ohere ime ememe agbamakwụkwọ na olili ozu. [Foto na nri] N'ihi nke a, Chọọchị nke Ụbọchị Ikpeazụ nke ụbọchị a na-ebipụta akwụkwọ ziri ezi nke ọ bụla Dudeist ọ bụla a họpụtara ahọpụta nwere ike ịzụta ma ọ bụrụ na ndị ọchịchị obodo ha chọrọ (Kosnac 2017: 145).
Na mbido, Dudeism bụ nwoke gosipụtara, mana nke ahụ anaghị emetụta ọzọ. Otú ọ dị, àgwà nke Dudely Lama, onye n'agbanyeghị na ọ bụghị ihe dị oke mkpa maka nlanarị nke Dudeism ọzọ, ka bụ naanị ezigbo ụzọ, na-eme ka ike gwụ, injin injin kachasị. [Foto dị n'aka nri] N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ na-echekwa ozi Dudeist n'ozuzu ya, ọbụlagodi ihe ọ na-amaghị nke ọma dị ka ihe na-emegide atụmatụ. Benjamin na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ọrụ chọrọ nlebara anya ya, ma kweta na ya bụ onye nrọ karịa onye na-eme ya, nke pụtara na ọtụtụ ọrụ na-aga nwayọọ nwayọọ. (Ajụjụ Ọnụ nke onwe nke 2018)
Ihe ịma aka ọzọ, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ụzọ ọ bụla juru ebe niile, bụ na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị Dude na-eche na Big Lebowski dị ka ihe nkiri na asụsụ na akara ngosi nke Dudeism nabatara na ya bụ ibu arọ karịa uru. Ha kwenyere na echiche na ozi nke Dudeism bụ ihe ziri ezi maka onye ọgbara ọhụrụ ma chọọ itinye ya na ndụ ha ma gbasaa ya, mana na ọ ga-amasị ọtụtụ mmadụ ma ọ bụrụ na ewepụ ma ọ bụ mebie akwụkwọ Lebowski na ọdịnaya Dude mgbe niile. . Ugbu a, Benjamin na - emepe ụgbọ nke ga - eweta ụdị Dudeism zuru ụwa ọnụ, nke ga - eji ụgbọ ala ndị ọzọ kesaa ozi ya wee dọrọ ọtụtụ ndị na - ege ntị. Kedu otu mgbalị a ga-esi metụta Dudeism ka ọ ga-ahụ.
**Oliver Benjamin bụ onye nwe ndị nwebisiinka nke ihe oyiyi a gosipụtara na profaịlụ a, ha ejiri ya na ikike ya.
Image #1: Foto nke Oliver Benjamin.
Image #2: Ụdị nke Dude.
Foto #3: Dudeism logo.
Image #5: Walter Sobchak, Onye na-agbachitere Okwukwe.
Image #6: ememe agbamakwụkwọ Dudeism.
Foto #7: Dude.
Benjamin, Oliver. 2013. "Oziọma ahụ dị ka Dude ahụ: Otu Big Lebowski si kpalite okpukpe." Na The Big Lebowski: Ihe Atụ, Akụkọ Nkọwapụta nke Kasị Ukwuu Okpukpe Ndị Kwekọrọ Ihe Niile, nke Jenny M. Jones dere. Minneapolis, MN: Voyageur Press.
Benjamin, Oliver na Eutsy, Dwayne. 2011. Nduzi Abide. Berkeley, CA: Ulyssess Press.
Dudeism weebụsaịtị. 2019. Nweta site na dudeism.com na 3 January 2019.
Dudeism Facebook Group. 2019. Nweta site na facebook.com/Dudeism na 2 January 2019.
Falsani, Cathleen. 2011. "Bible Dudeist: Naanị Na-adị Mfe, Mmadụ." The Huffington Post, July 20. Nweta site na huffingtonpost.com/cathleen-falsani/the-dudeist-biblejust-ta_b_903996.html na 4 January 2019.
"Akwa Dudes nke Akụkọ." 2019. Ebe nrụọrụ weebụ Dudeism. Nweta site na https://dudeism.com/greatdudes/ na 15 January 2019.
Kosnáč, Pavol. 2017. "Pop Culture - Isi Iyi nke Ime Mmụọ?" Pp. 45-55 na ọhụụ Okpukpe Ọhụrụ na Nke Obere: Na-atụle Ọdịnihu, edeziri site n'aka Eugene Gallagher. New York. Routledge.
"Ụdị Nhazi." 2019. Ebe nrụọrụ weebụ Dudeism. Nweta site na https://dudeism.com/ordination-form/ na 24 January 2019.
Mkparịta ụka onwe onye na Oliver Benjamin. December 2018, Chiang-Mai, Thailand.
"Gịnị bụ Dudeism?" 2019. Ebe nrụọrụ weebụ Dudeism. Nweta site na https://dudeism.com/whatisdudeism/ na 15 January 2019.